The supporting team to flood victims led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), started to provide the relief supplies since 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.
The BHAO Natural Disaster Assistance team delivered the relief supplies to flood- affected areas as follow:
(1) 1. On 22.7.2015 and 28.7.2015, the team went and support relief to Kanbalu, Kawlin and Wintho region
(2) 2. On 4.8.2015, the team delivered the supply items to Lapanwe village, Ywarkhaing village , and the shelter in Pwintphyu township
(3) 3. On 6.8.2015, the team flew to Kalay region
(4) 4. On 8.8.2015, the team donated supplies to Konezaung, Monezalae village in Pwintphyu township, and also donated robes and food to about 300 monasteries and nans
” စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ရေးရှု့နှင်လော့ “
နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတစ်ခုတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ရက်စွဲမှာ ၁၃၇၅-ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း (၁၂) ရက်၊ မန္တလေးမြို့ ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေး အသင်းရုံး၌ ကျင်းပသည့် (၁၅)နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဖြစ်ပြီး၊ သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်သော ၀ါဆိုကျောင်းတိုက်၏ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ( ရွှေကျင်နိကာယ အဓိပတိ ဥက္ကဋ္ဌ ) ဦးဆောင်သည့် သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး (၈)ပါးတက်ရောက်လာကြပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး မစမီ မန္တလေးမြို့ ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေး အသင်းကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်သစ်များ ရွေးချယ်ပြီး အခြေအနေ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ပြနာယူကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။စာရေးသူအနေဖြင့် မန္တလေးမြို့၏ ဂုဏ်ဆောင် နိုင်ငံတော်၏ ပထမဦးဆုံး စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော လူမှုကူညီရေးအသင်းကြီး၏ ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက် လှုပ်ရှား နေမှုများထက် သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၏ မိန့်မှာ ချက်များကို ဤဆောင်းပါး တွင် အဓိကထား၍ ရေးသားလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျောင်းတိုက် ဥဒ္ဒသမ ရွှေကျင်သာသနာပိုင် သက်တော်ရှည် ဆရာတော်ကြီး၏ မိန့်မှာချက်မှာ အထူးလေးစားလိုက်နာဖွယ်ကောင်းပါသည်။
• ဗြဟ္မစိုရ်၏ မူရင်းတရားများဖြစ်သော မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ
စသည့်လုပ်ငန်း တရားများကို အမှုဆောင်အသင်းသားများအနေဖြင့် မမေ့မလျော့ရှိကြရန်။
• နေ့စဉ် ပြုသင့်ပြုထိုက်သော ကုသိုလ်တရား(၁၀)ပါး (ပုညကြိယာ
၀တ္တု ဆယ်ပါး) တို့ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြရန်။
• မန္တလေးမြို့ ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကြီးသည် နိုင်ငံကျော်ရုံမက ကမ္ဘာကပင် အသိအမှတ်ပြုလာရသည့် အချိန်တွင်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေမှုများကို သတိထား၍ ဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ ဗောဓိပက္ခာသင်္ဂဟ တရား(၃၇)ပါး၌ ပါဝင်သော သမ္မပ္ပဓာန်
တရား (၄)ပါး နှင့်အညီ၊ ကောင်းစွာအားထုက် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်။
• မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားတို့၌ မဖြစ်စေခြင်းကိစ္စ။
• မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြစ်စေခြင်းကိစ္စ။
• ဖြစ်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားတိုကို ပယ်စေခြင်းကိစ္စ။
• ဖြစ်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို တိုးပွားစေခြင်းကိစ္စ။
ဤကိစ္စ (၄)ပါးတို့ကို လုံ့လထုတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုလွန်းသည်
လိုအပ်သည်တို့ မဖြစ်ကြစေဖို့ အထူးဂရုထားဆောင်ရွက်သွားကြရန် မှာကြားသွား ပါသည်။
ဒဟတ္တောဆရာတော်ကြီးကမူ အမှုဆောင်လူကြီးများအဖြစ် ဆောင်ရွက် ကြရာ၌ စည်းစည်းလုံးလုံးညီညီညွှတ်ညွတ်နှင့်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို ရိုးသားမှုရှိကြရန်၊ ကျေးဇူးရှိဖူးသူများ၏ ကျေးဇူးတရားကို မမေံမလျော့သိတက်ကြရန်၊ ဂရုဏာစိတ် အခြေခံ၍ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းများထားလျက် ဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ စိတ်သစ်ကို ရှာသကဲ့သို့ မိတ်ဟောင်းများမပျက်စေဖို့ သတိထားဆောင်ရွက် သွားကြရန် မှာကြားပါသည်။
ဒက္ခိဏရာမ ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီးကမူ နောင်တ တဖန်ဖြစ် ရမည့်အလုပ်မျိုး၊ သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကျအောင်ဖြစ်စေမည့် အလုပ်မျိုးတို့ကို ဆန့်ကျင်စိတ်ထား၍ ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့် “ သမဂ္ဂါနံ၊ တပေါ၊ သုခေါ ” ဟုဆိုထားသည့်အတိုင်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက် ကြခြင်းဖြင့်သာ သုခချမ်းသာကို ရရှိနိုင်မည့်အကြောင်းမိန့်မှာ သွားပါသည်။
မြတောင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးနှင့် ၀ိစိတ္တာရုံကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ကြီး များကမူ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မိန့်မှာခြင်းမရှိ ပဲ ခန္တီသည်းခံခြင်းတရားထား၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရာရာအောင်မြင်မည့်အကြောင်းနှင့် ဆရာတော်ကြီး များ၏ မိန့်ကြားချက်များကို နားထောင်နေရုံဖြင့်မပြီး လိုက်နာကျင့်သုံး နေထိုင်သွားကြရန်မှာ ကြားပါသည်။ ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကြီးကို ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့သော တောင်စလင်းတိုက်သစ် ဆရာတော်ကြီး ဦးတိက္ခက မိန့်ကြားရာ၌ ….
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏ လက္ခဏာများဖြစ်ကြသော နာယကဂုဏ် (၆)ပါးနှင့်အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်း သွားကြရန် မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ၀န်ထမ်းများ လက်အောက်ငယ်သားများ အပေါ်တွင် (၁) သည်းခံစိတ် ထားရှိခြင်း (၂) သနားညှာတာခြင်း (၃) ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကူညီခြင်း
(၄) နိုးကြားတက်ကြွမှု ရှိခြင်း (၅) လုံ့လ၀ီရိယရှိခြင်းနှင့် (၆) ဝေဖန်ပိုင်းခြား စွမ်းဆောင်ခြင်း စသည့် ခေါင်းဆောင် ကောင်း လက္ခဏာ(၆) ရပ်ဖြင့် ပြုမူဆောင်ရွက်သွားပါက ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကြီးအနေဖြင့်ရှေ့သို့ ဆက်လက် အောင်မြင် သွားမည့်အကြောင်းကို တိုက်တွန်းမှာ ကြားသွားပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် တောင်စလင်းတိုက်သစ်၊ ကျောင်း၊ တိုက်အုပ် ဆရာတော် ဦးနေမိန္ဒက ခန္တီခံတပ်ကြီးထားပြီး “အဒေါသ” မေတ္တာစိတ်ဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့် ရွှေဟင်္သာဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မိန့်ကြားချက်ဖြစ်သည့်-
စာရေးသူတို့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ဖတ်ခဲ့၊ ကြားခဲ့၊ အသဲထဲစွဲနေသော ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မိန့်မှာလင်္ကာလေးကို ဆရာတော် ရှင်နေမိန္ဒက ရွတ်ဆိုလျက် မန္တလေးမြို့ ဗြဟ္မစိုရ် လူမှုကူညီရေးအသင်း အမှုဆောင်များ၏ သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ ထံမှ သြ၀ါဒခံယူပွဲ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ နိဂုံးချုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကြီး၏ (၁၅) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားမှအပြန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုရေးအသင်းများ၏ ရှေ့ဆောင် ဦးရွက် ဖြစ်ခဲ့သော မန္တလေးဂုဏ်ဆောင် နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာသိဖြစ်နေသည့် ဤအသင်းကြီး၏ အမှုဆောင်အသစ်များသည် သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၏ မှာကြားချက်များကို ဦးလည်မသုန် နာယူလက်ခံဆာင်ရွက်ကြလျက် စည်းရုံးညီညွတ်စွာဖြင့် အများအကျိုး ရွက်သယ် ပိုးနိုင်သည့် အသင်းကြီးအဖြစ် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ကြစေရန် ဆန္ဒပြုလိုက်ရပေသတည်း။